Home News Hoggaamiyaha Xisbiga wadajir oo dacwad ka dhan ah Saadaq Joon u gudbiyay...
Hoggaamiyaha Xisbiga wadajir oo dacwad ka dhan ah Saadaq Joon u gudbiyay QM
Bishii November ee sanadkii hore Hey’adda Qaramada Midoobay ayaa loo gudbiyey eedeymo ka dhan ah Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir Jen. Saadaq John.
Warbixinta loo gudbiyey Qaramada Midoobay ayaa la sheegay inay qeyb ahaan aheyd mid qarsoodi ah oo kaliya lala wadaagay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay sida lagu sheegay warbixin gaar ah oo Laanta Afka Soomaaliga ee VOA ay ka sameysay eedeymaha ka dhanka ah Saadaq Joon.
Eedeymaha loo heysto Saadaq Joon waxaa ka mid ah inuu hoggaaminayey weerarlkii lagu qaaday Guriga Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Bishii December ee sanadkii 2017.
Weerarka lagu qaaday guriga Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa lagu dilay 5 kamid ah ilaaladiisa kadib is rasaaseyn ka dhacday gudaha guriga Cabdiraxmaan oo ku yaalo meel u dhow Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Jeremt Schulman oo ah Qareenka u doodaya Saadaq Joon ayaa sheegay inuusan ku lug laheyn weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isla markaasna amarkaas laga soo bixiyey Taliska Dhexe ee hey’adda Nabadsugidda.
Taliyihii hore Nabadsugida Cabdullaahi Sanbaloolshe oo uu qareenka Saadaq Joon sheegay inuu ka mid yahay marqaatiyaasha qiray inuusan Saadaq ku lug laheyn weerarka guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa VOA u sheegay inuusan isaga waxaas kala hadlin qareenka isla markaasna kaliya wax laga waydiiyey aqoonta uu u leeyahay Saadaq Joon mudadii ay wada shaqeenayey.
Wuxuu sheegay inuusan isaga marqaati ka noqon karin wixii uu Saadaq Joon sameeyey wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna kamid ahaa dadkii ka qeybgalay barnaamijkaan ay sameysay VOA ayaa sheegay inuu Saadaq Joon hoggaaminayey weerarkii lagu soo qaaday isla markaasna uu isaga Albaabka Guriga soo garaacay.
Wuxuu xusay inay hayaan marqaatiyaal badan oo qirayo inuu Saadaq Joon hoggaaminayey weerarkii Gurigiisa lagu qaaday.